သီးခြားလက်ကိုင် Swivel Spout ပါသောအနက်ရောင်ရေချိုးခန်း Faucet
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW အနက်ရောင်ရေချိုးခန်း Faucet သီးခြားလက်ကိုင်ဆုံလည် Spout ပါသော
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.915ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 23 ဖောက်သည် ratings
သံချေး၊ ချေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊
2320300B installation ကိုညွှန်ကြားချက်
ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet နှင့်အခြားလ်တာများအကြားအဓိကခြားနားချက်မှာအပူနှင့်အအေးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်လက်ကိုင်၏အနေအထားဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet တွင်လက်ကိုင်များသည် faucet ကိုယ်တိုင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလယ်ဗဟိုတွင်တပ်ဆင်ထားသောရေပိုက်များတွင်သင်သည်စုပ်ထဲသို့တွင်းတူးထားသောအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဥပမာအပေါက်တစ်ပေါက်ပါသောလက်အားဖြင့်ရေပူရေအေးကိုလက်ကိုင်တစ်ခုတည်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ဖြင့်ရေချိုးခန်းတွင်း၌အပေါက်သုံးပေါက်ကိုတူးရန်လိုအပ်ပြီးရေနှင့်ရေနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်သီးခြားလက်ကိုင်နှစ်ခုဖြင့်ရေကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရေအပူချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရေချိုးခန်းရေချိုးခန်း faucet ရွေးချယ်ခြင်း, သင်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများနှင့်အပြီးသတ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏အလှဆင်အရောင်ကိုအနက်ရောင်ဖြင့်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ကိုသင့်ရေချိုးခန်းထဲတွင်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရွေးချယ်ရမည်။ သင်၏အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ကိုသင်ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောအခါကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ကိုသင်၏ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းအသစ်၏ဗဟိုချက်အဖြစ်ရွေးချယ်ပါ။
Black ကျယ်ပြန့်ရေချိုးခန်း faucet
WOWOW ၏အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet သည်၎င်း၏လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ရန်လမ်းညွှန်နှင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ရေအေးနှင့်ရေပူကိုလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ထားသော connector နှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ရေချိုးခန်း faucet နှင့်လက်ကိုင်များအတွက်သင့်အနေဖြင့် ၁” - ၁.၅” အပေါက်သုံးခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ WOWOW အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနှင့်အညီ ၄ လက်မမှ ၁၆ လက်မစီတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet သည်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူခြင်းကြောင့် WOWOW သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ် ၅ နှစ်အာမခံချက်ပေးမည်ကိုမကြောက်ပါ။ ထိုပစ္စည်းသည်ရက် ၉၀ အခမဲ့ပြန်လာရေးမူဝါဒလည်းပါဝင်သည်။ WOWOW သည်၎င်း၏အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ကိုယုံကြည်ပြီး ၁၀၀% ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဖြင့်သာစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိနိုင်သည်။ WOWOW အနက်ရောင်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet ၏အားသာချက်များမှာ -
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ esthetics ပေါင်းစပ်
SKU: 2320300B Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: Black က, သီးခြားကိုင်တွယ်, လက်ကိုင်နှစ်ခု
အီး *** ဇ2020-06-20
အဆိုပါထုတ်ကုန်သူ့ဟာသူအဘို့ပြော၏။ တပ်ဆင်မှုသည်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်၊ အဲဒါကိုထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်တော်တော်များများယူခဲ့ပေမယ့်အရာအားလုံးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသွားခဲ့တယ်။ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါဓာတ်ပုံများကိုစစ်ဆေး, ဒီထုတ်ကုန်သူ့ဟာသူပြော၏
S က *** V ကို2020-06-24
သင်ဤအစုနှင့်မမှားနိုင်ပါ! သူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်လေးလံတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနက်ရောင်စုပ် faucets များအတွက် Home Depot နှင့် Lowes ကြည့်ရှုကြ၏။ အဘယ်သူမျှမနီးပါးအဖြစ်တော်တော်လေးခဲ့ကြသည်နှင့်အားလုံးအနည်းဆုံးစျေးနှုန်းနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစုံနှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါသည်။
J ကို *** င2020-06-25
တန်ဖိုးကြီးမားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်သာရှိသည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ။ လှပပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့အပြင်ကြည့်ရတာအရမ်းကိုပျော်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းအတွင်း၌အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်ပြီးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။
: D *** ဃ2020-06-27
လုံးဝဒီ faucet ကိုချစ်! ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် Nice & လေးလံသော လွန်ခဲ့သော4လကထည့်သွင်းထားသည်နှင့်ပြproblemsနာမရှိပါ။ Nice Matte အနက်ရောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်။
အို *** ဌ2020-06-28
တကယ်တော့အသွင်အပြင်နှင့် faucet နှင့်ဘူးသီးများကဲ့သို့ပေမယ့်ယိုစီးအဆို့ထိပ်အရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုပြီးသည့်နောက်၎င်းသည်အဖြူရောင်အရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူလိုက်သောပထမဆုံးပစ္စည်းကိုပြန်ပို့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အစားထိုးလက်ခံရရှိနှင့်ဒုတိယတစ်ခုကိုလည်းပြု၏။ ငါအရမ်း bummed တယ် ငါတို့ရဲ့ရေချိုးခန်းအသစ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့အရောင်ကိုသဘောကျပေမယ့်အဆို့နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိ၊ မရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ကွဲပြားခြားနားသောသွားတိုက်ဆေးနှင့်ဆပ်ပြာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများနှင့် Magic Eraser တို့ကို၎င်းတို့အားသန့်ရှင်းစေရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအရောင်ပြောင်းခြင်းအတွက်ဘာမှမကူညီနိုင်ပါ။ ဒီအဖျော်ယမကာအဖုံးများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါလုံးဝဒီကြယ်5ပေးပြီ!
N ကို *** မီတာ2020-06-29
ဒီရေချိုးခန်း faucet ၏အရည်အသွေးရုံကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကသေချာပေါက်ကောင်းစွာလုပ်နှင့်လေးလံသောတာဝန်ခဲ့ကြောင်းပြောပြနိုင်ဘူး။ ငါဒီနေရာမှာရေချိုးခန်း faucet အမျိုးအစားကိုရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါ့အိမ်သာမှာထိုင်မယ့်လက်ျာဘက်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ အခြားစတိုးဆိုင်များရှိစျေးနှုန်းများသည်ဤဈေးထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်တော်တော်လေးရှင်းလင်းပြီးအရာရာတိုင်းသည်ထင်သည်အတိုင်းသွားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်အောင်မြင်ပြီးလွယ်ကူသည်။ ယိုစီးမှုအဆို့သည်အစုံထဲထည့်ရန်လည်းကောင်းသည်။ ငါရှာနေတဲ့အရောင်အတိအကျပါ။ ရေချိုးခန်း faucet ရေချိုးခန်းထဲမှာအရမ်းထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုမည်သူ့ကိုမဆိုအကြံပြုသည်။
L ကို *** င2020-07-02
ဒီတော့ဝေး, အလွန်ကြီးစွာသော! ဒီနှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်မခင်ပွန်းကိုနာရီပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့ရပြီးရှိပြီးသားလ်တာများဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ငါ push- ယိုစီးမှုကိုချစ် ... ကလေးတွေအသုံးပြုရန်ဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလ်တာအနက်ရောင်အပြားဖြစ်ပြီးသင်ရရှိသောအရာသည်အဘယ်နည်း။ တစ်ခုခုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ငါဒီသုံးသပ်ချက်ကိုသေချာအောင်လုပ်မယ်။
အီး *** ဋ2020-09-28
ငါဒီ faucet ထား၏အသွင်အပြင်, လက်ရာနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ အပြီးသတ်လှပသည် ထုပ်ပိုးခြင်းအပါအ ၀ င်ဒီအစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးဟာ Lowe's နဲ့ Home Depot မှာရောင်းတဲ့တူညီတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အရည်အသွေးထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။
, G *** y က2020-07-28
စကျင်ကျောက်စားပွဲခုံတွင်အပေါက်သုံးပေါက်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနတ္တအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းသည်တပ်ဆင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်နှင့်အမျှသေဆုံးသည်ထက်များလွန်းသည်၊ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုအခြားရေချိုးခန်းတစ်လုံးဝယ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ငါတို့အခုချက်ချင်းပြန်လုပ်နေတယ်။ ငါပြုမည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုလှတယ်၊ အလေးချိန်လည်းရှိတယ်၊ လုံးဝ chintzy မဟုတ်ဘူး။
M က *** y က2020-07-29
ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ faucet အဟောင်းသည်သံချေးသွားကြောင်းသဘောပေါက်လာသည်။ ဒီအနက်ရောင် faucet အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ငါ push / pop-up ယိုစီးမှုကိုနှစ်သက်သည်။
B က *** r2020-08-01
ဒီ faucet ဟာလှတယ် အရပ်ရှည်တယ်၊ ကြံ့ခိုင်စွာပြုလုပ်ထားသည် ဒါဟာအားလုံးမှာစျေးပေါမခံစားရဘူး။ ဤသည်အလွန်တန်ဖိုးနှင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏သမီး၏ရေချိုးခန်းတွင်တပ်ဆင်ပြီးလှလှပပအလုပ်လုပ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ပိုများသော ၀ ယ်ယူရန်နှင့်အခြားရေချိုးခန်း faucets များကိုတူညီသောတစ်ခုနှင့်အစားထိုးရန်စီစဉ်ပြီးဖြစ်သည်။
F ကို *** r2020-08-02
ဒီဟာကိုရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အလွန်အမင်းကောင်းသော faucet နှင့်စျေးနှုန်းပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ်။ Popup ရေနုတ်မြောင်းများ၏ပန်ကာမဟုတ်ပေမယ့်ဒီစျေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးအတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်။
D *** ဎ2020-08-04
အိမ်တိုးတက်မှုလက်လီအရောင်းဆိုင်ကြီးများတွင် ၀ ယ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်ဤပစ္စည်းကိရိယာများကို WOWOW တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်စတိုးဆိုင်ရှိသူများ၏စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်သာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအလွန်ကောင်းသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စျေးပေါသောစကိတ်စီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ငွေစုဆောင်းရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည်သင်ပေးရသည့်ငွေထက်ပိုပြီးရရန်အတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းပြီးထုပ်ပိုးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ မိဘတစ် ဦး သည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ကဲ့သို့မျက်နှာပြင်များကိုကာကွယ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောဆိုးကျိုးကတော့လက်ကိုင်အချောဆုံးတစ်ခုတွင်အပေါ်ယံခြစ်ရာများရှိသည်။ ထုပ်ပိုးမှုအားလုံးကိုပေးသောကြောင့်ယင်းတို့ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သော်လည်း QC သည်ထိုပြေးပွဲတွင်နောက်ကျနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းတာကကံမကောင်းတာကနောက်ဘက်မှာရှိနေလို့ငါ့လည်ပင်းကိုသဘာဝမဟုတ်တဲ့ထောင့်ကိုတွန်းလိုက်တာမှလွဲရင်ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမတွေ့နိုင်တော့ဘူး ဖုန်းကိုပြန်ပို့ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ အဆိုပါ faucet အရပ်ရှည်ရှည်ပုလင်းဖြည့်ဘို့ကောင်းပါတယ်သောရေချိုးခန်း faucets နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးအရပ်ရှည်ရှည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုသူငယ်ချင်းများအားသေချာစွာအကြံပြုလိမ့်မည်။
: P *** y က2020-08-06
ငါအနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မယ့်ရေချိုးခန်းအတွက်ဒီဟာကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငွေအများကြီးမသုံးချင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဟာတခြားရေချိုးခန်းတွေမှာလိုအရည်အသွေးမြင့် Moen နဲ့ Delta faucet ကိုဝယ်မယ့်အစား၊ တစ်ခု ငါစျေးနှုန်းတစ်ဝက်အတွက်အရည်အသွေးမြင့် faucet ရလိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်သာငါသိခဲ့ပါ! (အမြန်ချိတ်ဆက်မှုကရိယာမှလွဲ။ ) connectors အားလုံးသည်သတ္တုဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်သွန်းထားသောသတ္တုသို့မဟုတ် Chrome အရောင်ရှိသောပလတ်စတစ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သတ္တုပစ္စည်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သတ္တုပါသည့်ဆေးရည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စျေးနှုန်းနှစ်ဆမှာပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ် faucets နှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။ ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အချောခံသည်ကြာရှည်ခံသည်။ ဒါဟာအိမ်မှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးရေချိုးခန်း faucet ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းကိုရောက်ရှိသည့်အခါ၎င်းသည်စနစ်တကျထုပ်ပိုးပြီးကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဆိုးကျိုးမှာ installation လမ်းညွှန်ချက်များသည်ရှင်းလင်းပြီးရှင်းလင်းချက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဟာကအရမ်းကောင်းတဲ့ ၀ ယ်စရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်၏အခြားရေသုတ်ဆေးများအစားထိုးရန်အချိန်ကုန်လွန်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကြီးအတွက်ပေးရမည့်အစား၊ ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေမည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
တစ်ဦးက *** တစ်ဦး2020-08-06
ပြီးပြည့်စုံတဲ့! ငါအရင်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမတပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါကငါလုပ်ခဲ့တာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ဒါကငါ့ကိုနည်းနည်းကြာအောင်လုပ်ခဲ့တာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့မခက်ဘူးလေ! အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဟောင်း faucet ချွတ်ခဲ့သည်။ ဒီကျယ်ပြန့် faucet နှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်၌တည်၏။
J ကို *** s ကို2020-08-08
ပြီးပြည့်စုံတဲ့! ငါအရင်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမတပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါကငါလုပ်ခဲ့တာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ဒါကငါ့ကိုနည်းနည်းကြာအောင်လုပ်ခဲ့တာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့မခက်ဘူးလေ! အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဟောင်း faucet ချွတ်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်သော WI တွင်ရေချိုးခန်း faucets (၃) ခုအစားထိုးခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အပေါက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အရွယ်အစားမှန်လျှင်သင့်ရဲ့အပေါက်ရဲ့မှန်လျှင် install လုပ်ဖို့စူပါလွယ်ကူသော, ငါ့ကြဘူး။ ငါသူတို့အားလုံးအတူတူအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်ယူဆ။ ကျွန်မရဲ့အပေါက်ကြီးတွေကိုတူးပြီးတာနဲ့ပြissuesနာမရှိဘူး။ သူတို့ကပိုကြီးတဲ့စုပ်၏အသွင်အပြင်ကိုပေးသောမြင့်မားသောနစ်မြုပ်အထက်တွင်ထိုင်။ သူတို့သည်ငါ၌ရှိသည့်အရာများထက် ပို၍ နောက်ကျသွားခြင်းမရှိချေ။
အို *** ဇ2020-08-09
ကျနော်တို့က "အခမဲ့" faucet နှင့်အတူပါသောသစ်တစ်ခုအချည်းနှီးဝယ်။ စျေးပေါခဲ့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အစားတစ်ခုခုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာတိုးတက်မှုစတိုးဆိုင်ကြီးတွေကိုသွားပြီးအရာရာတိုင်းကအရမ်းခေတ်မီနေပြီးငါ့အရသာကိုရှာနေတဲ့ဒေါ်လာ ၁၅၀ လောက်ရှိတယ်။ ငါတို့အွန်လိုင်းစစ်ဆေးရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးငါတို့ပေးလိုက်သည့်ငွေ၏ထက်ဝက်ကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇင့်ကောင်တာသည်အလွန်လှပပြီးအလွန်ကြံ့ခိုင်ပါသည်။
V ကို *** င2020-08-11
ကျွန်ုပ်၏လိင်ကွဲပြားမှုကိုခွဲခြားဆက်ဆံရန်မလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းရေကန်နှင့် faucet ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အစားထိုးလိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါဒီ faucet ကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ၄၅ မိနစ်အတွင်းမှာပဲငါ့စုပ်စက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ လွယ်ကူ install!
ဦး *** ဋ2020-08-12
ဤရွေ့ကားဝေးအားဖြင့်ငါဆောင်ခဲ့ပြီအကောင်းဆုံးသော faucets ဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့ဟာအသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးပြီ၊ ငါက“ နာမည်တံဆိပ်” တွေဖြစ်တဲ့တခြားသူတွေကိုငါဝယ်ခဲ့တယ်။ အရာရာတိုင်းကိုသူတို့စဉ်းစားခဲ့ကြပြီ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဒီဟာကိုဝယ်ပြီးမင်းနောင်တမရဘူး။
N ကို *** တစ်ဦး2020-08-13
ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်ပ်တို့ရဲ့ရေချိုးကန်အတွက်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ငါစုံ၏တ ဦး တည်းနှင့်အတူအနည်းငယ်ပြissueနာရှိခဲ့ပေမယ့်ကုမ္ပဏီမဆိုပြproblemနာမရှိဘဲပြန်လာဘေးကစောင့်ရှောက်၏။ ကျွန်မတို့ရဲ့အလှဆင်မှုနှင့်အတူperfectlyုံသွားသောအရည်အသွေးနှင့်စပျစ်သီးအချို့ကိုကြည့်ပြီးအလွန်သဘောကျမိသည်။
ကို C *** ဃ2020-08-15
ဒီ faucet ကအလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှု finish ကိုရှိပါတယ်။ faucet ၏ကွေးသည်မြင့်မားစွာထိုင်။ သင့်လက်ကိုလျှော်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။ ထည့်သွင်းယိုစီးမှုအပိုင်းအစလည်းကြီးလှ၏။
အီး *** s ကို2020-08-16
တစ်ကယ့်ကိုလှပ faucet အစုံ။ သူတို့သည်ငါ၏အချည်းနှီးသောအရာအပေါ်အလွန်ကြည့်ရှုကြ၏။ ထွက်ပေါ်လာသည့်ရေနုတ်မြောင်းတစ်ခုတွင်ပျောက်ဆုံးနေပြီးဖောက်သည်များက၎င်းတို့အား၎င်းတို့ပေးပို့နေသည်ဟုချက်ချင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။